WAA MAXAY SABABTA AY CALEEMO U NOQDAAN HURUUD AH EE KALANCHOE: SABABAHA LOO QABANAYO, GAAR AHAAN DARYEEL - DHIRTA GUDAHA
Maxaa la sameeyaa haddii caleemaha kalanchoe u noqdaan huruud?
Milkiilayaasha badan ee Kalanchoe waxay la kulmeen caleemo huruud ah, laakiin cid kastaa way ogyihiin sababta dhabta ah ee ay u dhaceen iyo sida loo wajaho xaalad sidan ah. Waxaa soo baxday in xaaladan ubax this si dhakhso ah loo daaweyn karo. Akhri sida loo sameeyo tan.
Noocyada daryeelka Kalanchoe
Fure u ah caafimaad leh Kalanchoe waa daryeelka saxda ah. Qaababka dhirta sii kordhaya sida soo socota.
Geedkuna wuxuu jecel yahay iftiin iftiin leh. Dariishadaha bariga iyo koonfur bari waxay ku haboonaanayaan meeleynta. Waxa kale oo muhiim ah in la ilaaliyo muddada nalalka. Maalinta iftiinka iftiinka ee dhirta waa 11-13 saacadood. Haddii aysan jirin iftiin dabiici ah, u iibso phytolamp dukaamo khaas ah oo ku rakib.
Ma taqaanaa? Magaca "Kalanchoe" wuxuu ka yimaadaa luqada Shiinaha waxayna u tarjumaysaa "viviparous."
Ubaxa waa mid aan qabin heerkulka. Xilliga xagaaga, ku hay heerkulkii + 18 ... + 23 ° S. Xilliga jiilaalka, waxqabadka heerkulbeegga ee heerkulku waa + 12 ... + 16 ° C.
Ubaxa si fiican ayuu u dareemaa qoyaan qolka ah inta u dhaxaysa 50-60%. Heerarka sare ee qoyaanka waxay noqon doonaan masiibo. Kalanchoe waxay u dulqaadaneysaa aboorka si fiican, laakiin joogitaanka dheer ee kulaylka iyo qallajinta ayaa sidoo kale noqon kara waxyeello.
Video: Qarsoonaanta daryeelka iyo koritaanka Kalanchoe ee guriga
Xilliga xagaaga, biyaha ubaxa hal mar toddobaadkii. Xilliga jiilaalka, waraabinta biyaha ilaa 1 mar 2 asbuuc. Nadiifi substrate oo keliya. Suululisu wuu rujin karaa. Waxaad tirtiri kartaa oo keliya caleemaha qoryaha qoyan.
Bacriminta waa in ay ahaato kaliya guga iyo xagaaga. Qulqulaya Kalanchoe ayaa sidoo kale la bacrimiyo xilliga dayrta, inta jeer ee bacarimiso - 1 jeer 3 asbuuc. Dhirta aan ubaxin waxaa lagu quudiyaa 1 jeer bishiiba.
Ubaxa waa ku fiican yahay:
dawooyinka caalamiga ah ee suuliyaddaha;
dhar-dhaqameedka-macdanta-dusha sare leh oo leh dhar-diireed oo hooseeya.
Beeralayda khibrad leh ayaa lagula talinayaa in ay yareeyaan qiyaasta lagu taliyey 2 jeer.
Waxaan kugula talinaynaa inaad ka akhrido noocyada ugu caansan ee Kalanchoe.
Qalabeynta iyo manjooyin
Xakamaynta succulent si dhakhso ah ayuu u koraa, sidaa daraadeed dhirtu waxay u baahan tahay in lagu qasmo sannad walba. Muddo ku habboon waa qeybtii labaad ee guga.
Dooro dheri 1-2 cm ka weyn kan hore ee dhexroorka. Awoodda waa inaaney aad u adkeynin. Xirmooyinka dhaadheer waa in laga fogaadaa.
Ubaxa wuxuu si fiican u koraa substrate heer sare ah ee succulents.
Haddii la rabo, waxaad diyaarin kartaa ciidda adigaa, isku dhafan oo is barbardhigaya:
Kala bedelka sida soo socota:
Saar qaboojiyaha cusub ee hoose ee dheriga.
Ku shub qayb yar oo ka mid ah substrate ah.
Ka saar ubaxa.
Iyadoo aan laga saari karin kubadda dhoobo ah ee xididka, u wareeji dhirta dher cusub.
Ka daadi dheecaanka substrate.
Kalanchoe ka dib markii loo bedelay celcelis ahaan muddo 7 maalmood ah.
Waa muhiim! Cunitaanka Kalanchoe ka dib markii lagu tallaalay ma noqon karto wax ka hor hal usbuuc.
Si uu baadiyaha Kalanchoe ugu wanaagsan, waxaa la sameeyaa sanadkiiba. Caleemaha xilliga guga waxay u baahan yihiin in la gooyo. Xilliga xagaaga ama ka dib ubax, dhirta ayaa la xoqay.
Maxay caleemaha Kalanchoe u noqdaan huruud iyo qalalan?
Taarikada caleenta suufka ah ayaa badanaa huruud noqda sababo dabiici ah. Qaybaha hore waxay u dhintaan si ay u koraan kuwa cusub. Waa in aadan walwalin haddii uu jiro ubax, afkoda xoog leh, wax dhaawac ah ma jiro, laakiin caleemaha hoose waxay qalalaan oo ay dhacaan. Ubaxa wuxuu u dhacaa sida ay tahay.
Cayayaanka cayayaanku waa suurtagal. aphids, qadhaadh, caarada caarada ama mealybuga. Aragtooda way fududahay in la ogaado, baarista caleemaha. Aphid - cayayaanka yar ee hooska madow, ku xiran gudaha gudaha caleen. Shchitovku ayaa go'aamiyey qolof dhejis ah. Dhanka kale, waxay u eg yihiin tuubbooyinka wareegsan oo leh dhexroor aan ka badnayn 3 mm.
Caarada caarada ayaa ka baxaysa webka caarada dhuuban ee caleemaha. Caaradooda waxay ku dhegaan gudaha gudaha warqadda. Mealybug waxaa la aqoonsan yahay ubaxyada cad, oo la mid ah bur. Gooryaanka nafsaddoodu waa caddaan, qaab-dhismeed, oo badanaa lagu daboolay isla ubaxyadaas. Cayayaanka waxay cabbaan casiir khudradda laga soo saaro taarikada caleenta, sababta oo ah caleemaha waxaa lagu daboolay dhibco, daciif ah oo jaale ah.
Si kastaba ha noqotee, caleemaha caleenta ee Kalanchoe badanaa waxay la xiriirtaa daryeel aan habooneyn. Florists waxay tilmaamayaan sababaha soo socda.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan cudurrada iyo cayayaanka Kalanchoe.
Ka gaabinta tiknoolajiyada dhulka
Qalad caadi ah marka la beerto geedka waa dheriga khaldan.
Nidaamka xididka ee ubaxa waa yar yahay, sidaas darteed milkiilayaashu si qalad ah ayey u doortaan dheriga ugu dhow. Xaqiiqdii, weel yar ayaa si fiican ugu habboon xididka geedka. Si kastaba ha noqotee, in aad u yaryar xoqan rinjiga ayaa adkaan doonta in la horumariyo. Gobolka geedka ayaa jabay. Sidaa darteed, cuduradu waxay horumarin doonaan. Caleemaha caleemaha waa mid ka mid ah cawaaqibta suuragalka ah ee dheriga ugu dhow.
Kalanchoe ma jecla dheriyada waaweyn. Xaaladahaas oo kale, dhirtu waxay ku jirtaa walbahaarka, dhoobo, caleenta waxay noqotaa jaale iyo dhicid.
Tayada caleemaha waxaa saameeya maqnaanshaha. Qeybta hoose ee taangiga markaad beerto ku jiifso isku darida biyaha. Fursad wanaagsan - dhoobo ballaariyey. Waxay xakamayn doontaa qoyaanka ciidda waxayna ka hortageysaa biyaha inay istaagaan.
Kalanchoe waxaa si dhib leh u saameeya muddada dayrta ee ka yar 11 saacadood. Dheriga leh warshad waxaa si fiican loogu meeleeyaa meel leh iftiin iftiin leh. Goobta woqooyiga iyo daaqadaha galbeed, gaar ahaan xilliga jiilaalka, waa wax aan fiicnayn. Saqaajayaasha sii kordhaya ee hooska ah uma adkeysan karaan la'aanta iftiinka. Qalabka Platinum ayaa qalalan, huruud noqda oo hoos u dhaca.
Sidoo kale waa lagama maarmaan in la helo warshad meel u dhow batteriga xilliga kuleylka. Meeshan waa ay adag tahay in lagu hayo xaalado aan fiicneyn.
Ma taqaanaa? Wadaaddada Madagascar waxay u adeegsadeen Kalanchoe ujeedooyin caafimaad. Casiirka ka soo baxa caleemaha jeermiska nabarrada oo qoyan maqaarka qorraxda qallalan.
U hoggaansanaan xaaladaha xabsiga
Xadgudubka microclimate si xun u saameyn ku leh gobolka geedka.
Heerkulka ka hooseeya + 10 ° S wuxuu noqon doonaa burbur. Laga soo bilaabo muddo dheer ee qabow, kalanchoe u dhintaan. Waa inaadan dhigin qol leh tilmaamayaal heerkulku ka sarreeyo + 25 ° C. Heat ayaa sidoo kale ka qaybqaadanaysa huruuda caleemaha.
Beeraha ubaxa waxaa lagula talinayaa in aaney geedka ku shubin xaaladaha qoyaan badan. Haddii heerkulka qoyaanka ee qolka ka sareeyo 80%, suurtogalnimada caaryada iyo jilicsanaanta ayaa sarreeya. Haddii talooyinka caleemaha la qalajiyey oo loo beddelay huruud, sababtu waxay ku dhici kartaa qallaylka hawada. Sida haddii ubaxa aan jeclayn hawada qalalan, inta lagu jiro kuleylka ama kuleylka xilliga kulaylka heerka qoyaanka wuxuu noqonayaa mid aad u hooseeya. Tani waxay keentaa dhibaatooyin, gaar ahaan, qulqulka iyo qalalan ee saxanka xaashida.
Biyaha aan habboonayn badanaa waxay keenaan hurdi caleemo.
On waraabinta ku filan ayaa sheegaya in taarikada caleenta qalalan. Waqti ka dib, waxay noqdaan kuwo khafiif ah waxayna noqdaan huruud.
Halis badan ayay u tahay Kalanchoe fara badan oo badan. Calaamada ugu horeysa ee ka-waraabinta waa jilicsanaanta saxanka caleenka. Si ka duwan sida waraabinta biyaha aan ku filneyn, waxay ka sii fiicnaanayaan halkii qalalan. Leaves waxay noqdaan huruud. Haddii aadan saxsanayn xaalada, way ku adkaaneysaa in ay joogaan stem.
Sidoo kale akhri waxa la sameeyo haddii Kalanchoe uusan ubaxin.
Khaladka ugu weyn ee bacriminta waa daaweynta khaldan. Kalanchoe waxay si fiican u dhigtaa quudinta adag ee quudinta iyo quudinta loogu talagalay suulin. Waxaa lagu talinayaa in la eego halbeegga oo dooro bacriminta leh qadar yar oo nitrogen ah. Quudinta kale ee ubaxa waxay u arkaan sida ugu fiican. Sidoo kale fiiro u yeelo nooca daawada. Waa inay noqoto wakiilo biyo-dareere ah oo lagu daro biyaha inta lagu jiro waraabka.
Bacrimin joogta ah waa dhibaatada caadiga ah ee bilowga beeralayda ubaxa. Dad badan ayaa u maleynaya in lacag badan, Kalanchoe ka sii fiican u koraan iyo Bloom. Wax kasta waxay ubaahantahay cabbir. Xilliyada ugu badan ee la sameeyo - 1 mar 3-4 toddobaad. Xilliga jiilaalka, bacrimin laguma dabaqi karo. Si kastaba ha ahaatee, dhar dhaqameedka aan caadiga ahayn sidoo kale waxay u nugul yihiin ubaxa.
Beeraleyda ubaxu waxay yaqaanaan hal sadare oo lagu ilaaliyo caafimaadka dhirta. Kalanchoe uma dulqaadanayo qiyaasaha xoogga leh ee xoogga leh ee Bacriminta. Haddii aad isticmaasho daroogooyinka caalamiga ah sida waafaqsan tilmaamaha, ubaxa waa la dhaafi doonaa. Xaalad liidata, wuxuu muujin doonaa caleemaha yellowed.
Waxa la sameeyo iyo sida loo daweeyo geedka?
Caleemaha cagaaran maaha cudur, laakiin calaamad. Tani waxay calaamad u tahay dhirta ku saabsan daryeelka qaldan. Daroogo ma caawineyso haddii waraabinta, mikroclimate ama labisashada ay waxyeeleeyaan ubaxa. Hawlaha mulkiiluhu maaha in laga takhaluso muujinta muuqata, laakiin si loo baabi'iyo sababta.
Sababta ugu badan ee caleenta huruudka ah waa daryeel aan habooneyn. Florist ugu horeysay ee si loo aqoonsado qaladka ee beerista. Si aad u bogsato ubax, waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso daryeelka.
Laga soo bilaabo dhirta waraabinta soo noqnoqda oo xididdada. Si loo daaweeyo ubax, ku dar qalab cusub. Marka lagu sameynayo dib u gurasho, nadiifi xididada dhulka. Qaybaha Putrid waxay u baahan yihiin in la gooyo. Geedi socodka jarista dhuxusha la jajabiyay ee jeermiska.
Cayayaanka marka hore waxay u baahan yihiin in laga saaro caleemaha. Suufaan qoyan oo biyo qoyan ayaa sameyn doona ujeedadaas. Ku nadiifi suuculent leh cayayaanka. Kalanchoe ku habboon macneheedu waa "Inta badan", "Malathion" ama "Metaphos".
Waa muhiim! U hubso inaad ka saarto qaybaha ay saameeyeen ee Kalanchoe! Ha uga tegin asliga ah.
Beddelidda habka succulent sii kordhaya, waxaad hagaajin doontaa xaalada. Mustaqbalka, ficilada saxda ah, dhibaatadani mar kale ma dhici doonto.
Kahortaga ugu wanaagsan ee caleemaha huruudka ah - daryeelka caafimaadka leh. Waxay saamaysaa ma aha oo kaliya xaaladda guud ee ubaxa, laakiin sidoo kale iska caabin cudurada iyo cayayaanka. Iyada oo ay ku habboon tahay beerashada saxda ah, suurtagalnimada weerarrada cayayaanka waa la baabi'iyay.
Tallaabooyinka looga hortagayo huruuda caleenta ee Kalanchoe:
iibso ubax dukaamo khaas ah - iibiyeyaasha aan walbahaarka lahayn waxay iibin karaan geedka la daciifiyay ama qaba cudurka;
si fiican u daryeelidda dhirta - abaabulidda mikroclimate optimal, xakamaynta waraabinta iyo quudinta, soo celinta geedka wakhtiga;
si joogto ah u baaraan caleemaha cayayaanka cayayaan;
Si kastaba ha noqotee, waxaa suurtagal ah in la isticmaalo cayayaanka ka hortagga cayayaanka, tusaale ahaan, Aktar, si kastaba ha ahaatee, diyaarinta noocan ah waa qoyaan dhexdhexaad ah - beerayaasha ubax waxay ku talinayaan mar kale inayan ku dhicin daaweyn aan loo baahneyn isla markaana si habboon u daryeelaan geedka.
Caleemaha Jaalaha ah ee Kalanchoe - dhibaatadu maaha mid khatar ah, laakiin waxay u baahan tahay fiiro gaar ah. Daryeelka habboon iyo ka saarista cayayaanka ayaa kaa caawin doona in laga takhaluso caleenta yellowed. Sida gunno - milkiiluhu wuxuu heli doonaa ubax caafimaad leh oo qurux badan.